वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : यो याम ढल्किँदैछ!
यो याम ढल्किँदैछ!
"यो याम यसरी पिएर ढल्किँदैछ
यो रातलाई साथ लिएर ढल्किँदैछ
टुट्नुको के कुरा? पग्लिसकेपछि
पानीमाथि उभिएर ढल्किँदैछ
फूल र काँडाको खाता पोल्नुअघि मेट्नुअघि
जोड-घटाऊ एक जिएर ढल्किँदैछ
यो याम यसरी पिएर ढल्किँदैछ
यो रातलाई साथ लिएर ढल्किँदैछ"
[केहि दिन यता केहि शब्दहरु खेल्न थालेका थिए मनमा। त्यहि खेललाई एउटा आकार दिने कोशिश गरेको छु माथि। गजल लेखनमा आत्मविश्वास भएको मान्छे ठान्दिन म आफूलाई, तर खेल्ने क्रममा गजलकै अस्थिपञ्जर बोके मेरा भावनाले। मतला र दुई शेरमात्रै छन्। एक या दुई शेर थपौं कि जस्तो पनि लागेको थियो तर जुन सहजतापूर्वक यी फुरेका थिए, त्यति सजिलै अरु नफुर्ने देखिए। कनी-कनी केहि थपें भने तिनमा ज्यान बिल्कुलै नहुन सक्छ। त्यसैले यत्तिनै पस्किएँ। समय हुँदा यिनै शेरलाई अझ मिलाउने कोशिश भने गर्नेछु।
अनि एउटा निर्णय पनि गरें, अब म गजल पूरा गर्न भनेर कनी-कनी शेर बनाउने काम गर्न छोडिदिनेछु। सहजतासाथ जति फुर्छन्, त्यत्तिमै चित्त बुझाउनेछु।]
Posted by Basanta at 6:24 PM
kshama June 25, 2010 at 7:56 PM
Though couldn't follow verbatim,the image conveysalot! Feel like converting it inawall piece!
रमेशमोहन अधिकारी June 25, 2010 at 9:45 PM
सेर नदोहोरिएकै राम्रो । सेरहरूले दिन खोजेको भाव भने निख्रिएर आउन खोजे जस्तो लाग्छ । प्रत्येक सेर एक एक भाव बोक्न सक्षम छन् र पनि कम्तीमा एक सेर थपे राम्रो होला !
RRijal June 25, 2010 at 10:32 PM
मेरो पनि उस्तै हालत छ वसन्त जि । भावना र कल्पना शक्ती अपुरो हो कि शब्दज्ञान नपुगेको हो भन्दै आँफैलाई सोध्दै छु ।
हजुरको गजल र तलको नोट देखेँ अनी काफिया सर्सर्ती हेर्दा 'सिएर' सम्झँदै पुन पढेको मलाई यस्तो शेर विचार आयो । आशा छ मर्म मारेको छैन ।
सेतो हिँउले अँध्यारो नछोप्दा सम्म,
साकुरा फुल्ने हाँगा, सिएर ढल्किदैछ।
'फूल र काँडाको खाता पोल्नु अघी' भन्ने मिसरामा अझै घोतलिदै छु ।
Dhruba Panthi June 25, 2010 at 11:18 PM
छोटो, मिठो र शायद अलिकति अमूर्त पनि हो कि! :)
दूर्जेय चेतना June 26, 2010 at 5:53 PM
मेरा लागि त गजल मात्र पढ्न मज्जा आउने बिषयहो र मलाई पनि बिल्कुलै थाह छैन यस बारेमा।। गजलको नियम कानुन त यसका पारखी साथीहरुले नै केलाउनु हुनेछ। तर मलाइ भने भाव निकै मन पर्‍यो। समय सबैको यसरी नै गईरहेको छ अझ भनौ ढल्किँदै छ....
वेदनाथ पुलामी June 26, 2010 at 7:53 PM
" यो याम यसरी पिएर धल्किदैछ
यो रातलाई साथ लिएर धल्किदैछ "
दमदार गएको छ नि बसन्त दाइ - छोटै भए नि राम्रो छ !
Ashesh June 26, 2010 at 9:53 PM
गज्जव मन पर्यो मलाई त । सँगैको तस्विरले अझ बढी मादकता थपेको छ ।
सूर्य/सिकारु June 26, 2010 at 10:05 PM
बसन्त जी तपाइले भने जस्तै गजलमा ज्यान हाल्न नसक्ने अस्थिपन्जरमा म पनि पर्छु ।
यो सिर्जना मलाइ भने अति मिठो लाग्यो ।
Jotare Dhaiba June 27, 2010 at 4:42 PM
यो गजल र टिप्पणी पढिसकेपछि मनमा खगेन बा (संग्रौला) का सूत्र छल्किए - 'कनेर नलेख्नू, लेख्दा नढाँट्नु ।'
सही निर्णय गर्नुभयो, कनेर लेख्द आकार लेला कुनै रचनाले, तर त्यसमा प्राणतत्व निस्किदैन ।
यो गजलको कुरा गर्दा, नढाँटी भन्दा मलाई तपाईंका लेख, कविता र कथा भन्दा कम्ती नै मन पर्‍यो ।
अलि अप्ठेरो अभिव्यक्तिमा जेलिएको अनुभूति हुने गर्छ । तर प्रयास भने यहाँले जारी राख्नु नै हुनेछ, मैले देखेको छु त्यो प्रकाश ।
Chaitanya June 29, 2010 at 8:11 PM
अलिकति कसरत नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो गजलको मर्म बुझ्नलाई | मेरो बुझाइमा यो गजल जीवनको भोगाईलाई त्यसको दार्शनिक पक्षसित सम्मिश्रण गरेर लेखिएको सुन्दर अभिव्यक्ति हो | स्वतस्फुर्त रचनामा जस्तो दम हुनेगर्छ, त्यस्तो यसमा प्रचुर छ | आफु गजल लेख्ने मान्छे नभएकोले मीटर, सेंटीमिटरका कुरा हेर्ने, बुझ्ने कुरो भएन |
कलमबीर_घोताने June 30, 2010 at 1:17 PM
हुन त साहित्यको क्षेत्रमा के कस्ता नियम छन् होला, तर मेरो बिचारमा पनि अरु पाठक मित्रहरुको जस्तै कुरा हो। आफ्नो भावनालाई पोख्न कुनै नियम पालना गर्नुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन बसन्त दाई। तपाईंको रचना राम्रो छ। मीठो लाग्यो :)
समसामयिक आफ्नै कुरा कविता-गीत-गजल भाषा-साहित्य जापानमा नेपाली जापान मुक्तक ब्लग किताब यात्रा-संस्मरण हाँसौं कार्यक्रमहरु कथा छलफल श्रद्धाञ्जली बाल-मनोविज्ञान ब्यंग्य यताउताबाट ओशो पाहुनाको कोसेली प्रकाशित सुन्ने कुरा खेलकूद शुभकामना नेपाली ब्लगर लघुकथा अन्तर्वार्ता तस्बीर कथा प्रकृति बाल्यकाल भुटानी-नेपाली नेपाली ब्लगरहरु संस्मरण Paragliding औषधी-उपचार चलचित्र तस्बीर मात्रै निबन्ध पर्यावरण पोखरा प्रविधि बिदा बुद्ध भूकम्प २०७२ राजनीति संस्कृति समाचार सहयोग स्थानीय सरोकार
'खत्तम' खेल अफ दि सेञ्चुरी
केहि फुटबल जोकहरु
फुटबल 'कुम्भमेला'को याम
आधुनिक जापानको इतिहास